I-Manyana Beach Bungalow-unxweme oluyi-300m, iimbono ezibethwa ngumoya
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGabrielle
Yiba namava omlingo weNSW kunxweme olusemazantsi ngexesha lokuhlala kwakho eManyana Beach Bungalow.
-Bright & fresh 2 storey beach house, ilungele amaqela okanye iintsapho.
-Amagumbi okulala ama-4 kunye namagumbi okuhlambela ayi-2, balala kamnandi abantu abadala abayi-6 kunye nabantwana aba-4 (ilinen yelinen & iitawuli).
-Ukuhambahamba okufutshane ukuya elunxwemeni, iidekhi ezi-2 ezibanzi ezifihlakeleyo (i-bbq yegesi kunye ne-oveni yepizza), iyadi enkulu evulekileyo yemidlalo yengca.
- Ishawari yangaphandle enamanzi ashushu okuhlanjwa emva kokuqubha.
Kufuphi kwiindawo ezinomtsalane zasekhaya-Mollymook, Hyams Beach, Milton, Pigeon House Mountain.
Amagumbi okulala x 4: amagumbi okulala ama-queen ama-2 phezulu, igumbi lokulala eli-1 lokumkanikazi elisezantsi, igumbi eli-1 elinebhanti kumgangatho ongezantsi elineebhanti ezi-4. Ukulala ukuya kuthi ga kwi-10 yabantu, ilungele abantu abadala abayi-6 kunye nabantwana aba-4. Nceda uqaphele iindwendwe kufuneka ZIZISE ILINEN YAKHO (aishidi, iitawuli, iziliphu zomqamelo).
Igumbi lokuhlambela x 2: igumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa kwigumbi eliphezulu ukusuka kwindawo yokuhlala, igumbi lokuhlambela elikumgangatho osezantsi elinebhafu enkulu, ishawari eshushu engaphandle/ebandayo elungele ukuqubha okanye ukusefa elunxwemeni.
Indawo yokuhlala yangaphakathi: Indawo yokuhlala edibeneyo edibeneyo yokuhlala kunye nendawo yokutyela phezulu eneendawo zokuhlala ezinkulu ezi-2, itafile yokutyela yezihlalo ezi-8, umoya opholileyo kunye nefenisha yesilingi. Kumgangatho ophantsi igaraji eguqulweyo ineTV eyahlukileyo kunye neFuton lounge elungele abantwana abazifihlayo.
Indawo yokuhlala yangaphandle: Idesika ezi-2 ezibanzi ezingaphantsi, umgangatho ophezulu une-BBQ kunye ne-oveni yegesi yepizza, itafile enkulu yokutyela yangaphandle ehlala abantu abasi-8-10, iifeni zesilingi, isifudumezi kunye neembono ezintle zemithi eneembono ezimbalwa zolwandle.
Ikhitshi kunye nempahla yokuhlamba: Ikhitshi langoku elikumgangatho ophezulu linendawo yokupheka yegesi, i-oveni, imicrowave, umatshini weNespresso kunye nekhabhathi yokubeka iindwendwe. Iziselo ezigcinwe efrijini kuyo yonke ibhiya yakho kunye ne-champagne esezantsi kunye nempahla.
Iyadi: iyadi engaphambili enengca evulekileyo, ilungele iziselo zasemva kwemini kunye nemidlalo yengca.
IManyana yidolophu ezolileyo nentle eselunxwemeni kunxweme olusemazantsi lweNSW yomlingo, kufutshane neBendalong turnoff kuHola weNkosana malunga noku. Iiyure ezi-3 kumazantsi eSydney.
Ngoxolo ukhwelwe kude nesihlwele kunye nokugcwala uyakufumana zonke iindawo ezinomtsalane zalapha ngaphakathi nokuba kukuhamba umgama okanye ngaphantsi kwemizuzu eyi-5 ngemoto, kuquka neentlobo ngeentlobo zokusefa nokuqubha iilwandle, iingoma zokuhamba emahlathini, iGreen Island, kunye neLake Conjola.
Ukuphonononga ngakumbi, ngaphakathi kwe-30-45 mins drive ungafikelela eMilton, eUlladulla, eMollymook, eHyams Beach, ePigeon House Mountain kunye neCupitt Winery. Azikho iivenkile eManyana, kodwa iikhefi ezimbini ezinkulu zasekhaya (eBendalong naseCunjarong Point) ngaphakathi kwemizuzu engama-30 uhamba elunxwemeni okanye i-5 mins drive.
Umbuki zindwendwe ngu- Gabrielle
Mum, wife & pharmacist, work for a pharmaceutical company. Love travelling and eating out.
Inkxaso ekhoyo ekude
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3382
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Manyana